Kutengesa IN Zviri Mukati hakusi Kutengesa UYE Zvirimo | Martech Zone
Chitatu, Kurume 19, 2014 Chitatu, Kurume 19, 2014 Douglas Karr
Mukutaura nekambani inogadzira zvemukati zvemukati, ivo vakakurukura kuti mamwe emukati iwo mazano avakamhanyisa flagpole akarambwa nekuti zvirimo hazvina kunanga kukanganisa kutengesa yezvigadzirwa zvavo kana masevhisi. Ugh. Iyo yakashata zvine hungwaru hurongwa. Kana icho chinangwa chechimwe nechimwe chezvinhu zvako zvemukati ndechokutengesa chimwe chinhu, iwe unogonawo kungovhara iyo blog uye utenge kushambadzira.
Usandibata zvisiri izvo - vamwe vanhu kunze uko vari kutsvaga chigadzirwa kana sevhisi inozovabatsira kugadzirisa dambudziko uye iwe zvirinani uve nezviri mukati izvo zvinovaendesa kunotengesa. Asi kana ose chidimbu chemukati chiri kuedza kuvatyaira kunotengesa, hausi kupa chero kukosha kune vateereri vako.
Ini ndichapa mimwe mienzaniso:
TinderBox - yavo sisitimu inoshandura basa rinonetesa rekunyora zvakatemwa zvirevo nezvibvumirano nevatengi, zvichibvumira makomenti, red-lining uye masiginecha edhijitari. Kana zvese zvavakanyora nezvazvo zvaive maficha avo mazuva ese, hapana aisvika kune yavo saiti. Nekudaro, ivo vanonyora zvinyorwa zvinonakidza izvo zvinopa kukosha kune vatungamiriri vekutengesa vanodzoka nekudzokorora kuti vaverenge zvirimo.
Mindjet - chikuva chavo chinobvumidza ideation, kubatana, mepu-mepu uye kunyangwe manejimendi manejimendi. Saiti yavo haitsanangure zuva rega rega kuti chigadzirwa chavo chiri nyore sei kugadzira mindmap, yavo Ronga blog inogovera zvisingaite zvemukati pane hunyanzvi uye zvazvinoita munzvimbo yebasa. Icho chimwe chezviwanikwa zvepamusoro zvemafungiro uye hunyanzvi paInternet.
Right Pane Inopindirana - ivo vanotengesa yekushambadzira otomatiki software ... asi yavo blog inotaura kune yevatengi lifecycle, kutenga kutenderera, kukosha kwevatengi, kuchengetedzwa kwevatengi uye zvimwe zvinhu zvakakura munzvimbo. Nepo vakwikwidzi vavo vachigara vachizeya nezvezvimwe zvinotungamira pamusoro pefanera, Right On Interactive inoshandisa imwe nzira - ichitsanangura mawaniro aungaita vatengi vakanyanya kukosha uye vachazogara nesimba nekambani yako kuwedzera kudzoka kwekudyara.
Chinyorwa chaAngie - inopa kwakadzama kuongororwa kwevanopa masevhisi vanovimbwa nekuti ivo havazivikanwe uye kambani inoshandira kuyananisa uye kuona zviitiko zvehutano zvepamusoro kune avo vanonyoresa. Asi saiti yavo inopa toni yeruzivo nezve maindasitiri, zviitire-pachako kuraira kune vanhu, uye kuraira kwakasimba kune vanhu vari kutsvaga iro rinotevera sarudzo rekutenga. Ivo havasi kutengesa kunyoreswa nezvirimo zvavo, ivo vari kuwedzera rutendo urwo vatengi vanarwo mavari uye nekupa kukosha kupfuura kweongororo.
Muverengi paanoverenga zvinyorwa, ivo vanotanga kugamuchira kuti kambani inonzwisisa matambudziko avo uye kushungurudzika. Kubudikidza nezviri mukati, muverengi anowana imwe kukosha kubva kukambani, anovaka kuvimba nekambani Uye, pakupedzisira, mikana yekuve mutengi inowedzerwa zvakanyanya. Chinangwa chevakawanda zvemukati hachisi chekukurumidza tengesa munhu wacho, kuvaratidza hunyanzvi hwako mundima yavo, kuvaratidza simba rako, hutungamiriri hwako, uye nekupa kukosha kwakanyanya pane kungotenga chigadzirwa kana sevhisi.
Paunowana izvi, zvemukati zvako zvinotengesa.
kuburitsa: Iwo makambani akanyorwa pamusoro apa vese vatengi vedu.
Tags: zvemukati zvekutengesaKugonesa Kugonesa